मुख्य पृष्ठस्वास्थ्य स्वास्थ्य जीवनशैलीजाडोमा गर्भवतीलाई कस्तो समस्या देखिन्छ ? सतर्कता अपनाउने कसरी ?
चिसो मौसममा अन्य समयको तुलनामा बढी स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ । चिसोले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका, गर्भवती महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा पहिलाबाटै स्वास्थ्यमा समस्या भएकालाई धेरै सताउने गर्छ ।
शारीरिक र मानसिक परिवर्तन आउने हुँदा गर्भावस्थालाई आफैंमा एउटा जटिल र विशेष अवस्था मानिन्छ । एक गर्भवती महिलामा आमा बन्ने खुशीका साथै आफ्नो स्वास्थ र गर्भमा हुर्किँदै गरेको शिशुको शारीरिक र मानसिक विकासको चिन्ता पनि हुन्छ ।
बललिँदो मौसम र समयसँगै बढ्दै गएको चिसोमा देखिन सक्ने समस्या, चिसोका कारण गर्भको शिशुलाई केही समस्या पो हुन्छ कि भनेर सोच्नु स्वभाविक हो । जाडोमा विभिन्न भाइरल संक्रमणले सताउने डर हुन्छ । पछिल्लो समय कोभिड–१९ बाट संक्रमण हुनसक्ने जोखिम बढी छ ।
चिसो मौसम सुरु हुनेबित्तिकै वा वातावरणीयको तापक्रम कम हुँदै पनि सतर्क रहनुपर्छ । बदलिदो मौसमसँगै आफूलाई स्वस्थ राख्न केही सावधानी अपनाउनु पर्छ ।
जाडोको समयमा गर्भावस्थामा छुट्टै समस्या भने हुने हुँदैन । गर्भावस्थामा देखिने अन्य जटिलताका बाहेक जाडोमा गर्भवती महिलालाई धेरैजसो रुघा, खोकी, ज्वरोले नै सताउने गरेको पाइन्छ ।
श्वासप्रश्वास प्रणलीमा संक्रमण गर्ने भाइरस जाडोमा बढी सक्रिय हुन्छ । सामान्यदेखि लिएर मौसमी रुघाखोकी, इन्फ्लुएन्जाजस्ता भाइरसको संक्रमण जाडोमा बढ्छ ।
गर्मी मौसमभन्दा चिसोमा भाइरस लामो समयसम्म बाँच्नसक्ने भएकाले संक्रमणको खतरा बढ्छ । कोरोना महामारी त्रासले पनि गर्भवती महिलालाई तनाब बढाएको छ ।
जाडोमा देखिन्छन् यस्ता समस्या
भिटामिन डीले रोगप्रतिरोधात्मक शक्तिलाई बढाउन मद्दत गर्छ । जाडोमा घाम कम हुनेकारण भिटामिन डीको कमी हुन्छ ।
बन्द कोठा, भेन्टिलेशन नभएको ठाउँमा धेरै जना बस्नाले पनि संक्रमण फैलिने सम्भावना बढाउँछ ।
जाडो मौसममा चिसो, मौसमी रुघा र कोरोनाको भयसँगसँगै गर्भवतीलाई यूटीआई र छालासम्बन्धी केही समस्याले पनि सताउन सक्छ । जाडो महिनामा पानी असाध्यै चिसो हुने हुँदा पानी छुने, नुहाउनु तथा पिउने कुरामा कमी आउनु स्वाभाविक हो । तर, गर्भावस्थामा प्रशस्त पानी पिउने र सरसफाइमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।
गर्भको वृद्धिसँगै पाठेघर ठूलो हुँदै जान्छ र यसले पिसाब नलीलाई थिच्ने हुँदा पिसाबथैलीमा पिसाब सञ्चित हुन्छ । जसकारण पिसाबथैलीमा ब्याक्टेरियाको वृद्धि हुने र मुत्रपथ संक्रमण (यूटीआई) हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
जाडो मौसममा गर्भवति महिलामा छालाका समस्याले पनि सताउने गर्छ । गर्भवती महिलाका छाला पहिलादेखि नै फुस्रो हुने तथा चिसो मौसममा छाला थप सुख्खा हुने कारण छाला फुट्ने, चिलाउने समस्या देखा पर्न सक्छ ।
गर्भावस्थामा बढी स्याहार चाहिने हुन्छ । चिसोमा सबैभन्दा पहिला पहिरनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । चिसो मौसममा पनि शरीरको तापक्रम स्थिर बनाइरहनुपर्ने हुँदा मौसमअनुसारको बाक्लो तथा न्यानो पहिरन रोज्नुपर्छ ।
शरीरलाई पूर्णरूपले ढाक्ने पहिरन लगाउनुपर्ने भएपनि सजिलोका लागि खुकुलो लुगा रोज्नु उपयुक्त हुन्छ । बाक्लो पहिरनले चिसोबाट मात्र नभइ मौसमी फ्लु तथा अन्य भाइरल संक्रमणबाट पनि जोगाउने गर्छ ।
अन्य समयमा जस्तै जाडोमा पनि गर्भवती महिलाले पोषणयुक्त खाना, फलफूल तथा झोलिला र रेसादार खानेकुराको बढी सेवन गर्नुपर्छ । जाडो मौसममा गर्भवती महिलाले धेरै समय बाहिर बस्नुभन्दा पनि न्यानो तर, नगुम्सिएको भेन्टिलेसन र घाम लाग्ने कोठामा बस्नु पर्छ ।
भिटामिन डीका लागि बिहानको घाममा बस्न उपयुक्त हुन्छ । कोभिडको संक्रमणबाट बच्न भीडभाडमा नजाने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने, हात धुने गर्नुपर्छ ।
पिसाबको समस्याबाट बच्नका लागि पानी तथा झोलिला खाना प्रशस्त मात्रामा सेवन गर्नुपर्छ । चिसो पानी पिउन गाह्रो भएमा मनतातो पानी, कागतीपानी, महपानी तथा सुपको सेवन गर्न सकिन्छ ।
पानी चिसो छ भन्दैमा सरसफाइमा कमी गर्न हुँदैन । राम्ररी हात धुने, सफा र सुकिलो लुगा लगाउने, शारीरिक सरसफाइ, भित्री अंगको सफाइ तथा वातावरणीय सफाइमा पनि ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।
खानेकुरा पनि सफा गरेर मात्र खाने गर्नुपर्छ । छाला सुख्खा भएमा तेल वा मोइस्चराइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ । शारीरिक व्यायाम, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, आराम आदि गर्नुका साथै मानसिक तनाव र भयबाट टाढा बस्नसके गर्भवती महिलाका लागि राम्रो हुन्छ ।
कसरी सतर्कता अपनाउने ?
जति सावधानी अपनाए पनि गर्भावस्थामा बिमारी नै नहुने, चिसोले नसमात्ने भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन् । गर्भावस्थामा केही समस्या देखिए आफूखुशी औषधि सेवन गर्नुभन्दा पनि तुरुन्त चिकित्सकसँग परामर्श गर्नुपर्छ । गर्भावस्थामा आफूखुशी औषधि सेवन गर्नु एकदमै गलत हो ।
धेरै गर्भवती महिलाले चिकित्सकसँग परामर्श गर्न नरुचाउने तथा परामर्शपछि चिकित्सकले लेखेको औषधिसमेत सेवन नगरेको पाइन्छ । तर, समयमै आवश्यक औषधि उपचार नगर्नाले रोग बढ्ने तथा जटिलता थपिन सक्छ ।
गर्भवती महिलाले नियमित चिकित्सकसँग परीक्षण गराउने र आवश्यक परामर्शपछि दिइएको औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
(मोरङ सहकारी अस्पतालमा कार्यरत प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर शाहसँग अंकिता ताम्राकारले गरेको कुराकानीमा आधारित)